Green is Green | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » Green is Green
Posted by Green Rose on Mar 12, 2013 in Creative Writing, My Dear Diary, Photography, Travel | 17 comments
ရာသီဥတုက ပူလွန်းလို့ ဒီလိုဒီလိုလေးတွေကို မြင်ရရင် နည်းနည်း အပူလျော့သလိုခံစားရတယ်။
ဒီဓါတ်ပုံတွေက Green Rose အိမ်နီးချင်း ထိုင်းနိုင်ငံဆီသွားတုန်း လည်ရင်းပတ်ရင်း ရိုက်ခဲ့တာလေးတွေပါ။ အဆူလည်း ခံရပါရဲ့ လူမပါပဲ တွေ့ရာတွေ မြင်ရာတွေ လျှောက်ရိုက်နေလို့လေ။ သူတို့ဆီမှာ ထိုက်သင့်တဲ့အခကြေးငွေယူပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ ၀န်ဆောင်မှုရှိတာကိုလည်း အားကျမိတယ်။ ဒီမှာလည်း ဒီလိုပြင်ဆင်ပြီး ဒီလိုဝင်ငွေရှာနိုင်မယ်ဆိုရင်……။ လူတော်တော်များများကိုလည်း အလုပ်ပေးနိုင်မယ်။ ၀င်ငွေလည်း တိုးမယ်။
အဲဒီ့ပုံလေးတွေ ရိုက်ယူခဲ့တဲ့နေရာက Bang Pa-In Palace လို့ခေါ်တဲ့ Summer Palace ထဲမှာပါ။ 17 ရာစုအတွင်း King Prasart Thong လက်ထက်က Chao Phraya မြစ်အတွင်း Bang Pa-In island ပေါ်မှာ တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ စတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာက King Prasart Thong ရဲ့ သားတော် King Narai (1656-1688) မွေးဖွားတဲ့ 1632 ခုနှစ် မှာဖြစ်ပြီး The Aisawan-dhipaya-assana Yoyal residence လို့ခေါ်တဲ့ အဆောက်အဦး တစ်ခုတည်းသာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိ အဆောက်အဦးအများစုဟာ King Chulalongkorn (1868-1910) လက်ထက်မှာ 1872 မှ 1889 အတွင်း ဆောက်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိ King Rama IX နဲ့ Queen Sirikit တို့ရဲ့ စံနန်းတော်အဖြစ်နဲ့ ဧည့်ခံပွဲများ စားသောက်ပွဲများ စတဲ့ ပွဲများကျင်းပရာနေရာအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။ ဧည့်သည်များ ၀င်ရောက်ကြည့်ရှု လည်ပတ်ခွင့်ရှိပြီး ၀င်ကြေးအဖြစ် လူကြီးတစ်ဦးလျှင် ဘတ် 100 သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ (ခလေးတွေအတွက် ဘယ်လောက်ယူသလဲ မသိပါ) အထဲဝင်တဲ့အခါ အမျိုးသမီးများ ဒူးအောက်အထိရှည်တဲ့ အ၀တ်အစားဖြင့်သာ ၀င်ခွင့်ရှိပြီး မလုံမခြုံဝတ်လာသူ အမျိုးသမီးများအတွက် ဂိတ်ဝမှာ အ၀တ်အစားငှားရမ်းပေးရာ ဌာနတစ်ခု ဖွင့်ထားပါတယ်။
အစိမ်းရောင်ကပေးတဲ့ အေးချမ်းမှုကို ခံစားပျော်ရွှင်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
(ဒါနဲ့ ရွာထဲမှာ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ အစီအစဉ်လေး ရပ်တန့်နေသလားလို့)
အစ်မ Green rose ရေ မင်္ဂလာပါ ။
ဓါတ်ပုံထဲမှာ တစ်ရှုးတွေ ၊ ကြွတ်ကြွတ်အိတ်ခွံတွေ ၊ ကွမ်းတံတွေးတွေ မတွေ့ ရဘူးတော့ … ။ သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ဖြစ်တည်နေတဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ လက်လွယ်စပယ် ချပစ်မယ့် စိတ်ဓါတ်ပိုင်ရှင်တွေ ရှိနေလျှင်တောင် ပစ်ချဖို့ တွန့်နေကြမယ်ထင်တယ် ။ ဒီနိုင်ငံမှာလည်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ စိတ်ဝင်စားအောင် စွဲဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာမျိုးတွေ အများကြီးရှိပါတယ်… သေချာ မထိန်းသိမ်းကြလို့ လုပ်ကွက်ရှိလျှက်နဲ့ အများကြီး နစ်နာတယ် ။
ကာလာတွေထဲမှာ အစိမ်းရောင်ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ ။ အစိမ်းရောင်ဆိုလျှင် ဘယ်အမျိုးနွယ်စိမ်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကြိုက်ပါတယ် ။ ဖက်ဖူးစိမ်း ၊ ဘဲခေါင်းစိမ်း၊ အစိမ်းရင့် ၊ ရေညှိစိမ်း ၊စိမ်းပြာ အများကြီးပဲ ဟီး သစ်ပင်စိမ်းစိမ်းတွေ မြင်ရရုံနဲ့ တကယ့်ကို အေးချမ်းပါအိ ။
အမလေး တော် ဒေါ်တုံက ကာလာထဲမှာ အစိမ် ခရေစီဆိုပါလား… နာချစ်သုအုပ် မမစိမ်းလေး လုံလုံခြုံခြုံ သိမ်းထားအုံးမှ……..တော်ကြာ……… ဟိဟိ
ဟုတ်တယ် etone ရေ
Green Rose တို့ဆီမှာ တကယ်လုပ်ရင် လုပ်သလိုရနိုင်တဲ့ လုပ်ကွက်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
Green Rose အဲဒီ့မှာ သတိထားမိတာလေးတစ်ခုက သူတို့က အပန်းဖြေစရာ နေရာတွေကို အမှတ်တရ သမိုင်းဝင်နေရာတွေနဲ့ တွဲပြီးဖွင့်ထားတာပါပဲ။ အရမ်းကောင်းတဲ့ idea လို့ မြင်မိတယ်။ အဲဒီ့ နန်းတော်ဆိုရင် နန်းတော်ပတ်ဝန်းကျင်ကို အပန်းဖြေချင့်စဖွယ် ပြင်ဆင်ထားတာပါ။ လူတစ်ယောက် ၀င်ကြေး ဘတ် 100 ဆိုတာ မြန်မာငွေ 3000 နီးပါးမို့ ပန်းခြံ သပ်သပ်ဆိုရင် ၀င်ကြည့်ကြမယ်မထင်ပါဘူး။ အခုတော့ နန်းတော်ဟောင်း၊ လက်ရှိလည်းအသုံးပြုနေဆဲ ဆိုတော့ ဗဟုသုတလည်းရ အပန်းလည်းပြေပေါ့လေ။ ပေးရတာ တန်တယ်လို့ပဲ …………..။
Green Rose တို့အတုယူသင့်တာပါပဲ။ လုံခြုံရေးကိုလည်း စံနစ်တကျထားထားပြီးတော့ သန့်ရှင်းရေး သာယာလှပရေးကိုလည်း သေချာလုပ်နိုင်ရတာက အဲဒီ့ က၀င်ငွေက စရိတ်ကိုသေချာ ကာမိနေတာကြောင့်ပါပဲ။
ဂရင်း စိမ်းလေးရော အစိမ်းရောင်လေးဝတ်ပြီး မြက်ခင်းစိမ်းလေးအပေါ်မှာရိုက်ခဲ့ဘူးလား။
ခိုင်ဇာပြောမှ အဲဒီ့နေ့က ၀တ်တဲ့ဝတ်စုံကို သတိထားမိသွားတယ် အစိမ်းတော့အစိမ်းပဲ ဒါပေမယ့် စစ်စိမ်း
Green Rose ဆိုတဲ့ အမည်နဲ့လိုက်ဖက်စွာ စိမ်းစိမ်းလေးတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ြုပီး မျက်စိထဲ စိမ်းသွားတယ် အဲ အေးသွားပါတယ်လို့။
မမစိမ်းရဲ့ စိမ်းမြမြအလှကို တစ်စိမ့်စိမ့် ခံစားသွားပါကြောင်း
စိမ်းကားခြင်းရဲ့ နောက်တွင် xxxx စိမ်းကားခြင်းသူ့ဝတ်စုံဆင် xxx စိမ်းကားခြင်းနမိတ် ပုံများ xxx
အစိမ်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ကိုညီထွဋ် ရဲ့ ဂန္ဓ၀င် စိမ်း ဆိုပြလိုက်တာ ….။ ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းဝတ်စုံအစိမ်းကို ပိုကြိုက်ပါတယ်…။ အော်……. မနက်ဆိုရင် ညီမလေးတွေ စာမေးပွဲဖြေကြရတော့မှာပါလား (ဘာမှလည်းမဆိုင်ဘူးနော့– ဒါပေမဲ့သူကြီးကတော့ 10 ပေးလိုက်ရတာပဲ )
ပုံလေးတွေ မြင်ရတာ အေးချမ်းမိပါရဲ့ …
ဒါမယ့် .. သေးနေတော့ …
အေးသင့် ဒလောက်ဒေါ့ အေးဘူးပေါ့ …
သူတို.ဆီမှာလဲ ကျွန်တော်တို. ဆီက ဘုရားတွေမှာလို အတိုအပြတ် မ၀တ်ရဘူး ဆိုပါလား.. လဲဝတ်ရတယ်ဆိုပါလား…
ဒါနဲ. အဲလို လဲဝတ်ရတဲ့ အဲဒီ နေရာရှေ.မှာ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် ဆိုင်းဘုတ်အနီးအကြီးကြီးနဲ. ဟိုဟာမ၀တ်ရဘူး၊ ဒီလိုဆို မတက်ရဘူး ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်များ ထောင်ထားသေးလား ဟင်………
ဆိုင်းဘုတ်တော့သတိမထားမိဘူး၊ အဲဒီ့အ၀တ်အစားလဲဝတ်ဖို့အတွက် တာဝန်ကျဝန်ထမ်းတွေက သတိမထားမိပဲ ဒီအတိုင်းဝင်သွားတဲ့လူတွေကို လှမ်းအော်သတိပေး၊ လက်ဆွဲပြီးလဲခိုင်းတာတွေ ရှိပါတယ်။
မျက်လုံးအေးစေတဲ့ အင်မတန်သာယာလှပ စိမ်းစိုတဲ့
ဓါတ်ပုံလေးတွေ ကြည့်ရှု့ အားပေးသွားပါတယ် Green roseရေ..
ကိုခင်ခ၊ ဗုံဗုံ၊ နေ၀န်းနီ၊ ဦးပေ၊ မဟာရာဇာအံဇာတုံး၊ အန်တီ padonmar၊ ဦး Kyeemite တို့ရေ ကြည့်ရှုအားပေးသွား တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မဟာရာဇာအံဇာတုံးရေ ပုံတွေသေးသွားတာ ဆောရီးပါ၊ ဘယ်ဆိုဒ်လောက်တင်ရင် အဆင်ပြေမလဲဆိုတာမသိတာနဲ့လေ….
ဦးပေရဲ့ ကဗျာကတော့ Green Rose ဥာဏ်မမှီပါဘူးလို့ပဲ……….
နေ၀န်းနီရေ.. Green Rose လည်း ကျောင်းစိမ်းဝတ်ခဲ့ရတဲ့ ဘ၀လေးကို အကြိုက်ဆုံးပါပဲ။ တကယ်လို့ ကျောင်းဝတ်စုံက အဖြူ နဲ့ အစိမ်းမဟုတ်ပဲ တခြားအရောင်ဆိုရင်လည်း အဲဒီ့အရောင် ၀တ်ရတဲ့ ကာလကို မက်မောမိမှာပါပဲ။ တူညီဝတ်စုံတွေကြားထဲမှာ ဖြူစင်မှု၊ လွတ်လပ်မှု အပြစ်ကင်းမှုတွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းခဲ့လို့ပါ။
မနှင်းစိမ်းရေ.. ဓါတ်ပုံတွေက အေးချမ်းနေဒါဗြဲ..
စနစ်နဲ့ စည်းကမ်းတကျ နှစ်များစွာ ကြပ်မတ်ခဲ့လို
အခြေကျနေတဲ့ သဘောပါ။ ကျနော် ကုန်တိုက်တစ်ခုမှ
ဈေးသွားဝယ်တော့ ပစ္စည်းမနိုင်လို့ ဆိုင်ကယ်ခြင်းထဲ
ကိုယ်တွေရွာမှာဆိုရင်တော့ အပျောက်ပဲ။ ဒါနဲ့
စကားမစပ်… အပျိုကြီးဖြစ်မယ် မိန်းမတွေက
အစိမ်းရောင်ကို ပိုပြီး နှစ်သက်စွဲလမ်းတတ်ကြတယ်..
လေ့လာမိဖူးတယ်.. ဟုတ်..မဟုတ်.. တော့..
Green Rose ရဲ့ နာမည်လေးလည်း ကြိုက်တယ်
အစိမ်းရောင်က ပေးတဲ့ အေးချမ်းမူ့လေးတွေကိုလည်း ကြိုက်တယ်